Waxa intaa dheer in waydiinaya su'aalo waqtiyo dabiiciga dheeraad ah iyo xaalado dabiici ah ka badan, technology cusub kale oo noo ogolaadaa in la beddelo qaab su'aalaha. su'aalo sahan intooda badan way xiran yihiin, halkaas oo jawaabaha uu ka soo xusho doorashooyin set qoray cilmi. Waa habka ah in hal sahan caan ah oo ku baaqay in cilmi-Tusaale ahaan, halkan su'aal sahan u xiran yihiin "gelinaya erayadan dadka afkooda.":
"Su'aashani waxay ku xigta waa saabsan mowduuca shaqada. Ma rabtaa inaad fadlan fiiri card iyo ii sheeg oo wax liiska this aad ugu jeclaan lahaa in shaqo? "
No halis la eryay;
Saacadaha shaqada waa gaaban, waqti badan oo lacag la'aan ah;
Fursadda waayo, horumarinta,
Shuqulku waa muhiim, iyo siinaysaa dareen ah guul.
Haddaba halkan su'aal la mid ah ka codsaday in qaab furan:
Inkastoo labadan su'aalo muuqan arrin la mid ah, tijaabo baadhitaan by Howard Schuman iyo Stanley Presser ah (1979) shaaca ka qaaday in ay soo saari karaan natiijooyin aad u kala duwan: ku dhawaad ​​60% oo ka mid ah natiijooyinka furan dhici baxsan qaybaha ee jawaabaha u xiran yihiin (Jaantuska 3.7).
Jaantuska 3.7: Natiijooyinka ka Schuman and Presser (1979) . Responses waa kuwo kala duwan oo ku xiran in su'aal la weydiiyay qaab xiran ama furan.
Inkasta oo su'aalo furan oo xiran dhali kartaa macluumaad arrin oo kala duwan oo labada ahaayeen caanka ah ee maalmaha hore ee cilmi sahan, xiray su'aalo u yimaadeen inay xukumaan duurka jooga. saldanad Tani ma aha, sababtoo ah su'aalaha u xiran yihiin ayaa la xaqiijiyay in ay bixiyaan cabirka fiican, halkii ay tahay sababta oo ah waxay inta badan ka sahlan in la isticmaalo waa; habka of sireed su'aalo furan waa adag oo qaali ah. Tallaabadan ayaa ka su'aalo furan iska Waa ayaan darro sababtoo ah waa si hufan macluumaadka cilmi ma ka hor markii aan ogahay in ay noqon karaan kuwa ugu qiimaha badan.
In qaar ka mid ah cilmi-baaris aan sameeyo Karen Levy, waxaan isku dayay in la abuuro nooc cusub oo su'aal sahan in isku daraa muuqaalada ugu wanaagsan ee labada su'aalo furan oo xiran (Salganik and Levy 2015) . Taas waxaa weeyaan, awood cilmi si ay u bartaan macluumaad cusub sida in su'aal furan, oo waxaa lagu edbiyey u fudud si ay u falanqeeyaan xogta sida in su'aal u xiran yihiin. Waxaa dhiirigelintiisa lahaa nidaamka online kexeeyey by content user-ahbaa, kuwaas oo Wikipedia waa exemplar ah, waxaan loo yaqaan nidaamka sahanka-Leaks ah. By shanleeyo dabeecadaha Wikipedia iyo baadhitaan dhaqameed, waxaan rajeyneynaa in la abuuro hab cusub oo wax weyddiinaya.
habka xog ururinta ee sahan-Leaks ah waxaa lagu muujiyey by mashruuc aynu ku samaynay Xafiiska New York City Duqa ayaa si ay u dhexgalaan fikradaha dadka degaanka galay PlaNYC 2030, qorshe waara ee magaaloweyn New York ee. Si aad u bilowdo hawsha, Xafiiska Duqa Magaalada ee liiska 25 fikrado ku salaysan oo ay wacyi hore (tusaale ahaan, "baahan dhammaan dhismayaasha waa weyn si ay u casriyaynta tamarta gaar ah," "Bar caruurta ku saabsan arrimaha cagaaran oo qayb ka ah manhajka dugsiga"). Isticmaalka kuwan 25 fikradaha sida "miraha," Xafiiska Duqa Magaalada waxa uu ka codsaday su'aasha "samayn Kuwaasoo aad u malaynayso in waa fikrad wanaagsan, waayo abuuraya a cagaar, weyn City New York?" Jawaab la soo bandhigay la labo ka mid ah fikradaha (tusaale ahaan, "schoolyards Open guud magaalada sida garoomada dadweynaha "iyo" Kordhi beegsaday beerto geed xaafadaha iyadoo heerarka neefta sare "), oo wuxuu weyddiistay inuu iyaga kala dooran (Jaantuska 3.8). Ka dib doorashada, jawaab bixiyayaasha ayaa isla markiiba soo bandhigay iyadoo labada kale kala sooc lahayn loo doortay fikradaha. Jawaab ay awoodaan in ay sii wadaan ka qeyb warbixin ku saabsan kala doorashada ay inta ay midkood cod u rajeeyay ama doorashada "Ma go'aansan kara." Daayacay, mar kasta, jawaabeyaasha ay awoodaan in ay ka qayb qaataan fikrado iyaga u gaar ah, kaas oo ilaa-ansixinta Duqa Magaalada Office-noqday qayb ka mid ah balliga fikrado in lagu soo bandhigo dadka kale. Sidaas darteed, su'aalaha in ay ka qaybgalayaashu helaan waa labada furan oo xiray isku mar.
Jaantuska 3.8: Wajahadda sahanka-Leaks ah (Salganik and Levy 2015) .
Xafiiska Duqa Magaalada waxa uu bilaabay baadhitaan Leaks ay October 2010 lala kulamo taxana ah oo bulshada si loo helo jawaab-celin deggan. In ka badan in ku dhow afar bilood, 1.436 jawaabaha ka qayb qaatay 31.893 jawaabaha iyo 464 fikrado cusub. Aadka, 8 ka mid ah 10ka fikrado dhaliyay ayaa uploaded by ka qaybgalayaasha halkii qayb ka mid ah set fikradaha farcankooda dambe ka Xafiiska Duqa Magaalada. Markaasaa, sida aan ku tilmaami in our warqad, tani waa qaab ee sahan badan Leaks. In si kale loo dhigo, by isagoo u furan yahay macluumaad cusub, cilmi-waxay awoodaan si ay u bartaan wax lahaa la baaqato la isticmaalayo habab dheeraad ah oo ku xiran in weydiinaya.